China Eco Baby Sula abakhiqizi nabaphakeli | Haicheng
Isingeniso: I-Baby Wipes iyindlela yokuwasha - mahhala futhi e-eco-friendly equkethe nje ingqikithi yesitshalo sokuthambisa isikhumba kanye nendwangu ethambile engavukiwe engenazo izithako zamakhemikhali futhi engenakho ukucasuka nokulimala esikhunjeni esibucayi sengane, esivivinywa, ngaphandle kwamagciwane. Ifektri yethu ingenza ngezifiso ukusula kwengane ngokuya ngezidingo zamakhasimende ze-OEM, osayizi abahlukahlukene, ukucaciswa okuhlukile, imiklamo ehlukile. Isibonelo: ama-20pcs ama-30pcs ama-40pcs ama-50pcs ama-60pcs ama-80pcs ama-100pcs. Ama-baby wipes akhiqizwa efektri yethu asebenzisa ukotini indwangu engalukiwe, ethambile futhi ebushelelezi, izitshalo ezikhishwa kuphela, azikho izithako zamakhemikhali, inqubo yokukhiqiza ku-100, 000 level workshop ehlanzekile, ngayinye inqubo ukukhiqizwa okuzenzakalelayo ngokuphelele, ukungcola - ukusebenza mahhala futhi okuphezulu. Qinisekisa ukuthi ukusulwa kwezingane okwenziwe kuphephile futhi kuhlanzekile. Ama-baby wipe angasetshenziselwa ukuhlanza izandla zomlomo, umlomo, isikhumba, izinqe, amabhodlela nezinto zokuhlinzekwa kwengane, kepha futhi nokuqinisekisa impilo yengane. Sinokuhlolwa okuqine kakhulu kwemikhiqizo yezingane, ngokuhlolwa kwe-workshop nokuhlolwa kwelabhoratri isheke eliphindwe kabili, kusuka kunani le-PH kuya ekuhlolweni kwamagciwane, ukufeza ubuhle. Ngokuqinisekile ungavumeli imikhiqizo engafaneleki ishiye ifektri, ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo. Ukukhethwa kokufakwa emaphaketheni kanye nezidingo zokusula kwengane kufanele kuhlangabezane nezindinganiso zamazwe omhlaba, futhi ngemuva kweminyaka eyi-17, sithole iziqu zokukhiqiza zokusula kwengane futhi sidlulise isitifiketi somkhiqizo nokuhlolwa komuntu wesithathu kwezikhungo zomhlaba jikelele. Sineqembu lochwepheshe bebhizinisi lokuhweba langaphandle kanye nomphathi ozinikele wemvume yamasiko, ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ihambisana nemithetho kazwelonke kanye nemithethonqubo yamazwe omhlaba, imvume yamasiko ebushelelezi, ukuthuthwa okusheshayo, nokufinyelela okuphephile endaweni yokugcina amakhasimende. Ifektri yethu nayo inethimba elisebenza ngemuva - lokuthengisa, amahora angama-24 ukuxazulula izinkinga zangemva - zokuthengisa zamakhasimende, ikhasimende nguNkulunkulu, ngoba ikhasimende lizenzele lona. Imikhiqizo yethu ithunyelwe eJapan, Hong Kong, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eYurophu nakwezinye izindawo, futhi kumnandi ukubambisana namakhasimende ethu kazwelonke. Ifektri yethu idinga ukukhokhelwa kwemikhiqizo eyenziwe ngezifiso, ukukhokha idiphozi, ukukhokha ibhalansi nomthethosivivinywa wokuhambisa lapho uhanjiswa, okungaqinisekisa izintshisekelo namalungelo ezinhlangothi zombili.
1 I-Eco Baby Wipes 20pcs / isikhwama 5bags / ibhokisi, 20boxes / ibhokisi, 1100cases / 40 HQ
2 I-Eco Baby Wipes 30pcs / isikhwama 5bags / ibhokisi, 20boxes / ibhokisi, 850cases / 40 HQ
3 I-Eco Baby Wipes 40pcs / isikhwama 50bags / ibhokisi, 1700cases / 40 HQ
4 I-Eco Baby Wipes 50pcs / isikhwama 40bags / ibhokisi, 1750cases / 40 HQ
5 I-Eco Baby Wipes 60pcs / isikhwama 30bags / ibhokisi, 1800cases / 40 HQ
6 I-Eco Baby Wipes 80pcs / isikhwama 25bags / ibhokisi, 1700cases / 40 HQ
7 I-Eco Baby Wipes 100pcs / isikhwama 20bags / ibhokisi, 1500cases / 40 HQ
8 I-Eco Baby Wipes 100pcs / ibhakede 20buckets / carton, 1350cases / 40 HQ
Indawo yesicelo: Izandla zezingane nomlomo wokuhlanza, ukuhlanza isikhumba sengane, ukuhlanza i-baby butt, ukuhlanza ibhodlela labantwana
Isingeniso Ukuhlinzekwa kwefektri logo yangokwezifiso ye-OEM baby multi-function akukho ukwengeza ama-PC ahlukahlukene i-Eco Baby Wipes yokuwasha izandla nezandla zomlomo zomntwana, ukuhlanza isikhumba sengane, ukuhlanza i-baby butt, ukuhlanza ibhodlela lezingane.
Incazelo Izesuli Zengane
Umsebenzi Imibhalo Yezingane
Ubuchwepheshe i-weave elula, i-pearl weave，anezikhala
Ukucaciswa 20pcs 30pcs 40pcs 50pcs 60pcs 80pcs 100pcs
Ukusetshenziswa Vula uphawu lokusula olumanzi, usule umlomo wesandla wengane nezindatshana zengane, Ukuhlanza izingane
Okuqukethwe kwesithako esisebenzayo Indwangu ka-Vitamin E Spunlace nonwoven
I-OEM / i-ODM：kwamukeleka
Langaphambilini Ukuhlanzeka okusula
Olandelayo: Ukubambezeleka kweGel Kwabesilisa